COVID-19 Management Chirongwa chakatangwa nePremier Medical Laboratory Services mukupindura mvumo yekudzivirira Bidid
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » COVID-19 Management Chirongwa chakatangwa nePremier Medical Laboratory Services mukupindura mvumo yekudzivirira Bidid
Premier Medical Laboratory Services (PMLS), iri kuzivisa nhasi kuvhurwa kwavo kwechirongwa che COVID-19 manejimendi, Chengeta America Inobudirira, yakagadzirirwa kubatsira masangano makuru nekutevedzera zvinobatika muBiden Administration Vaccine Mandate. NBC nhau dzakashuma kuti zvinogona kupedzwa svondo rino. "Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yanga ichishanda kusimudzira chinzvimbo chenguva pfupi chimbichimbi chinobata vashandirwi nevane zana kana kupfuura vashandi kuti vave nechokwadi chekuti vashandi vavo vabaiwa jekiseni zvizere kana kuongororwa vhiki nevhiki," rakadaro Dhipatimendi reVashandi.
Premier Medical Laboratory Services (PMLS), iri kuzivisa nhasi kuvhurwa kwavo kwechirongwa che COVID-19 manejimendi, Chengeta America Inobudirira, yakagadzirirwa kubatsira masangano makuru nekutevedzera zvinobatika muBiden Administration Vaccine Mandate. NBC nhau yakashuma kuti inogona kupedzwa svondo rino. "Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yanga ichishanda kusimudzira chinzvimbo chenguva pfupi chimbichimbi chinosanganisira vashandi nevane zana kana vanopfuura vashandi kuti vave nechokwadi chekuti vashandi vavo vabaiwa jekiseni zvizere kana kuongororwa vhiki nevhiki," rakadaro Dhipatimendi reVashandi.
Zvinotarisirwa neMutungamiri zvinoshanda kumabhizimusi anodarika zana nemakumi matatu muUS uye zvaizokanganisa vangangoita mamirioni makumi masere pasirese. Nekudaro, nevazhinji vekuAmerican vachiri kuzeza nezve majekiseni, iro basa rinotarisirwa kuisa dambudziko rakakura pakuvhenekwa kwenzvimbo dzakakonzerwa nekuwedzera kwekuda kweCIVID-130,000 bvunzo. Tichifunga izvi, PMLS inogadzirirwa neimwe yemahombekombe ekuyedza mukati menyika uye mukati mekugadzira zvigadzirwa zvemuyero zvisina muganho.
"Kana mamwe marabhoritari akadzikira panguva yekudzikama mumamiriro ezvinhu muzhizha nekuda kwekudonha kwekudiwa kwekuyedza, isu hatina kudaro," akadaro Kevin Murdock, CEO uye Muvambi wePMLS. “Takaramba tichiumba kugona kwedu selebhu kuti tigadzirire kumwe kuvhiya kwakafanana neiko kwatakatarisana nako izvozvi. Nechikonzero ichi, takagadzirira kubata zvine mutsindo kupfuura marabhoritari mazhinji munyika. ”
PMLS's automated workflowflow ye state-of-the-art michina yemarabhoritari yakavagonesa kuita kusvika kumazana mazana matatu ezviedzo zveECOVID pazuva ne300,000% yemhedzisiro yakapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana. Chikwata chavo chevatungamiriri vePD masayendisiti chakabatsira mukupindura kwenyika COVID-98. Nekuda kweizvi, PMLS ndiyo inovimbwa yekuyedza yekudyidzana nemapoka emitambo emitambo, zvikoro uye makoreji, makambani makuru, uye madhipatimendi ezvehutano munyika.
Nezvivakwa zvavo zvepamberi zviripo, chirongwa chePMLS cheKuchengeta America Chinobudirira chakanyatsogadzirirwa makambani ekugadzira, ekuparadzira uye ekuzadzikisa nzvimbo, makuru ezvitoro, kuvaka, uye masangano ane makuru, ari muhofisi mashandiro evashandi. Chengeta America Inobudirira inopa zvinotevera kuzvinhu izvi:
Iyo turnkey yakagadziridzwa pasite yekuyedza chirongwa chekuenderera kugovera kweyekuedza kits yekukurumidza, kwakarurama mhedzisiro
Kudzidzira kwepamhepo uye kubvunza nzira dzakakodzera dzekuyedza uye nzira yakasarudzika yezviyero zvekuyedza zvinobudirira
Rapid antigen bvunzo
PCR bvunzo dzinogona kuzadzwa panzvimbo